သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန်းလေးကိုရှင်းရင်း မိခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို အမှတ်တရအဖြစ်ခုချိန်ထိသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒါ်ခင်မြတ်မွန် – Askstyle
သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန်းလေးကိုရှင်းရင်း မိခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကို အမှတ်တရအဖြစ်ခုချိန်ထိသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒါ်ခင်မြတ်မွန်
ရေမွန် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတဝန်း ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်အမြောက်အများက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေမွန်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြတာပါ။ရေမွန်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်ဟာဆိုရင် သားဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာကို ခုထက်တိတိုင်လက်မခံနိုင်ပါသေးဘူးနော်.။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း သားဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့အခန့်လေးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန် တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြရင်း သူမစိတ်ဆိုးလို့ရေးပြီးပေးထားတဲ့စာလေးကိုပါ အမှတ်တရသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်မြတ်မွန်က ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ “သူဆုံးတော့ မှ သူ့အခန်း ကိုရှင်းရင်းတွေ့တာတွေက သူက အမှတ်တရတွေ ကို သိမ်းထားတယ်ဆိုတာပဲ အန်တီ သူ့ ကို ဆူပြီးရေးထားတဲ့ စာက အစ သိမ်းထား တယ်. “ဆိုပြီးရေမွန်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးအား အခုလိုပဲတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Source and video Credit ; Hall of Fame by ElevenCredit ; Celebrity Platforms
ေဇာၢ္ီ / ယူနီကုဒ္ ( ၂ မ္ိဳးလုံး်ဖင့ၹတ္ရႈႏိုငၸါသၫ္ )
ေရမြန္ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတဝန္း ေရမြန္ရဲ႕ ပရိသတ္အေျမာက္အမ်ားက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရမြန္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ေရမြန္ရဲ႕မိခင္ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ဟာဆိုရင္ သားျဖစ္သူဆုံးပါသြားတာကို ခုထက္တိတိုင္လက္မခံႏိုင္ပါေသးဘူးေနာ္.။ဒီတစ္ခါမွာဆိုရင္လည္း သားျဖစ္သူေရမြန္ရဲ႕အခန႔္ေလးကိုသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးေနတဲ့အခ်ိန္ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အရာေလးေတြကိုေျပာျပရင္း သူမစိတ္ဆိုးလို႔ေရးၿပီးေပးထားတဲ့စာေလးကိုပါ အမွတ္တရသိမ္းထားတဲ့အေၾကာင္းကိုမိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္ျမတ္မြန္က ေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အဲ့ဒါကေတာ့ “သူဆုံးေတာ့ မွ သူ႔အခန္း ကိုရွင္းရင္းေတြ႕တာေတြက သူက အမွတ္တရေတြ ကို သိမ္းထားတယ္ဆိုတာပဲ အန္တီ သူ႔ ကို ဆူၿပီးေရးထားတဲ့ စာက အစ သိမ္းထား တယ္. “ဆိုၿပီးေရမြန္ရဲ႕အေၾကာင္းေလးေတြကိုေျပာျပထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံကိုပရိတ္သတ္ႀကီးအား အခုလိုပဲတစ္ဆင့္ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္.။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။